Valiny haingana ho an'ny fonosana fanampiana ny fizahan-tany any India
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Valiny haingana ho an'ny fonosana fanampiana ny fizahan-tany any India
Associations News • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Dr. Subhash Goyal, filohan'ny Fikambanan'ny matihanina momba ny fizahantany any India, momba ny fonosana fanampiana ny fizahan-tany any India.
Misy ny fihetsika tsy mitovy amin'ny fivarotana fitsangatsanganana momba ny fepetra fanampiana ny fizahantany any India izay nambaran'ny minisitry ny fitantanam-bola hamelomana indray ny fizahantany. Ny fahatsapana ankapobeny dia hoe kely loatra, tara loatra, na dia ekeny aza fa tsy kamboty tanteraka ny indostria.
Ny minisitry ny Vola Union, Smt Nirmala Sitharaman, dia nanambara ny fonosana fanampiana ny fizahantany any India omaly 28 jona 2021.
Ny fonosana dia natao hamahana ny filan'ny mpizahatany sy ny fizahan-tany fizahan-tany noho ny COVID-19.
Ny vokatra andrasana dia ny fanamafisana ny toekarena any India amin'ny ady amin'ny tsy tambo isaina ireo olana ateraky ny coronavirus.
Dr. Subhash Goyal, filohan'ny Fikambanan'ny matihanina momba ny fizahantany any India, izay mitarika ny vondrona STIC, no nilaza izany tamin'ny fanambarana nataon'ny minisitry ny fizahan-tany momba ny fizahantany.
“Tara loatra ity fanambarana ity ary kely loatra. Olona 10 tapitrisa sahady no lasa tsy an'asa, ary orinasa an'arivony maro no lasa bankirompitra.
“Raha tsy misy ny fanambarana ny daty namoahana visa e-mpizahatany sy ny daty hanombohana ny sidina iraisam-pirenena voalahatra, tsy afaka mamelombelona ny fizahantany isika, ary tsy hisy dikany ny visa maimaimpoana. Ankoatr'izay, ny mpizahatany rehetra izay mandany saran-dalan'ny rivotra dia afaka mandoa ny sarany visa. Ity dia tombony ho an'ny mpizaha tany avy any Myanmar, Bangladesh, ary Pakistan ihany. Ny vola azo raha tsy manome visa fizahan-tany maimaimpoana dia azo ampiasaina amin'ny fanomezana vola fanampiana ho an'ny mpitarika fizahan-tany sy ny mpiasan'ny fizahan-tany.
“Tsy misy dikany ihany koa ny fanomezana indram-bola any amin'ireo mpitarika fizahan-tany sy mpandraharaha mpizahatany kely, satria ahoana no hamerenan'izy ireo ny indram-bola sy handoavana ny zanabola rehefa tsy misy orinasa? Raha tena te-hanampy ny governemanta dia tsy misy afa-tsy 11,000-12,000 ny mpitari-tolona eken'ny governemanta, ary ny governemanta dia afaka manome azy ireo fanampiana iray indray mandeha mora ihany araka ny fepetra nomeny ho an'ny tantsaha ary manome vola ho an'ny olona kesika ambany . Ao anatin'izany fepetra izany ihany, ny fanomezana dia azo omena an'ireo mpitarika fizahan-tany, mpandraharaha mpizahatany kely sy salantsalany, tompona bisy sy taxi ary mpamily, sns. Hanampy azy ireo hiaina izany mandra-pisokafan'ny sisintanintsika, ary manomboka ho tonga any India ireo mpizahatany.